बिहिबार, माघ ८, २०७७
भाबुक स्टाटस लेख्दै न्यूज २४ बाट बाहिरिए रबि !
कांंग्रेसलाई अफरै अफर, केन्द्रमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री
देउवाले भने, ‘संविधानलाई बचाउन एकजुट हौं ।’
प्रचण्डले भने, केपीजी निसन्तान हुनुभयो, उहाँको दोष हो ? (भिडियोसहित)
ढल्यो एउटा बलियो खम्बा : लडाईंको लाहुरेका चर्चित गायक रत्न बाँनियाको निधन
मंगलबार दिउँसो जारी भएको नयाँ अध्यादेशबमोजिम अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संवैधानिक परिषदको बैठकले चलिरहेको छ ।
यो अध्यादेशअनुसार अब संवैधानिक परिषदमा तीन जना उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्नेछन्। अर्थात्, प्रधानमन्त्रीले आफूसहित प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको उपस्थितिमा संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गर्ने बाटो खोलेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सार्वजनिक गरेको तस्विरमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सहभागी छन् । बैठकमा सहभागी सबै जनाले हाँसेर फोटो खिचाएका छन्
बैठकले महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु गर्ने बुझिएको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसिरहेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई रिक्त आयुक्तहरुको नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राईको सम्भावना रहेको छ । उनी पूर्व गृहसचिव हुन् । आयुक्तहरुमा केही पूर्व सचिव तथा पूर्व प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुखहरुमध्येबाट नाम चयन हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई समेत परिषदबाट निष्कासनजस्तै गरिदिएको बुझिएको छ । अब संवैधानिक अंगहरूमा हुने नियुक्तिमा उनीहरूको उपस्थिति आवश्यक हुँदैन।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: मङ्लबार, मंसिर ३०, २०७७ १८:४२:५९
लामो समयको प्रतिक्षापछि अन्तत: ‘छ माया छपक्कै’ युट्युवमा
भारतले नेपाललाई कोभिड–१९ विरुद्ध दश लाख डोज खोप दियो, भोलि नेपाल आईपुग्ने
६ दिनमा ३ लाख बढीले डाउनलोड गरे नागरिक एप, ७२ प्रतिशतले प्रमाणिकरण गर्न सकेनन्
गाउँपालिका कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको तस्विर हटाएर प्रचण्डको फोटो राखियो !
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक माघ १३ गते
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीन सांसदले राईकै पक्षमा
रावलको प्रश्न : ओलीजी, तपाईं संविधानको कुन धारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो ?